Thursday August 23, 2018 - 17:10:56 in Wararka by Super Admin
Filimka oo la waadan karo qadar 33 daqiiqo ah ayaa ku baxaya luqadda Carabiga AfSoomaali.
Al-Shabaab ayaa August 2017-dii weerar xoogan ku qaaday xero ciidan oo maleeshiyada DANAB ee uu Mareykanku tababaray ku leeyihiin deegaanka Bariire, Kaas oo lagu dilay ku dhawaad 100 askari, laguna burburiyey gabi ahaanba saldhigga.
Hal sano ka dib weerarkaas, Al-Shabaab ayaa baahisay filim ay ku soo bandhigeyso siduu u dhacay weerarkaas. Dagaalyahanada ayaa si aan naxariis ah lahayn u xasuuqay maleeshiyaatka, kana qabsaday dhamaan hubkii iyo agabkii ay wateen. Waa guuldaradii ugu xumeyd ee ku habsata maleeshiyaatka Soomaalida tan iyo markii ay timid Xukuumada Farmaajo.
Ku Degso kuna daawo Google Drive
Ku Daawo qaab kale
Ku daawo Kata'ib Drive
Halkan Ka Raadso Linkiyo badan oo Filinka ku saabsan